हतियार बुझाउन सरकारी वार्ता टोलीको प्रस्ताव आएपछि दियो बिद्रोही ने.क.पा.को वार्ता टोलीले यस्तो जवाफ - JanaSanchar.com
(२०७७ फाल्गुन २०, बिहीबार) 2021-03-04
सरकार र बिद्रोही ने.क.पा. बीच रातारात वार्ता टोली गठन भएर अप्रत्याशित रुपमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बुधबार एकै दिन दुई चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुले आफ्नो सामाजिक संजालमा रकार र विप्लव समूहबीच धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमति नजिक रहेको’ भनेका छन् । बिद्रोही ने.क.पा.को वार्ता टोलीको तर्फबाट भने कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफ्नो फेसबुकमा ‘सरकार र विप्लव समूहबीच धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमति नजिक रहेको’ भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘केही विषयमा छलफल जारी छ, छिट्टै सुखद् परिणाम आउने अपेक्षा छ ।’
त्यस्तै सरकारी वार्ता समितिका अर्का सदस्य प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि आफ्नो फेसबुकमा वार्ता सकरात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुले वार्ता समितिका सदस्यहरुले वार्ता सकारात्मक रहेको र समान धारणा बन्ने नजिक रहेको दाबी गरिरहे पनि सरकारी वार्ता टोली समक्ष बिद्रोही ने.क.पा.को वार्ता टोलीले आफ्ना प्रस्ताबहरु राखेको सस्माचार स्रोतको दाबी छ।
बुधबार भएका दुई चरणको वार्तामा बिद्रोही ने.क.पा. शान्तिपूर्ण बाटोमा जानेतर्फ लचक देखिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रामबहादुर थापाको दाबी छ । उनले प्राविधिक विषयमिलन बाँकी रहेको दाबी गरिरहंदा प्राबिधिक बिषय भनेको के हो भन्ने बारेमा खुलाइएको छैन। तर त्यो प्राबिधिक बिषय राजनीतिक हुन् सक्ने अनुमान गरिएको छ।
समचार स्रोतका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुले बिद्रोही ने.क.पा.का वार्ता टोलीलाई ‘हत्या हिँसा छाडेर शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आउँ अनुरोध गरेका थिए। त्यसपछि बिद्रोही ने.क.पा.का पक्षबाट ‘पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने , हिरासत/कारागारमा रहेका बन्दीलाई छाड्नुपर्ने र झुट्टा मुद्दा खारेज गरिनुपर्ने’, माग सारिएको थियो।
बिद्रोही पक्षको कुरा सुनेपछि सरकारी वार्ता टोलीले बिद्रोही पक्षलाई हतियार बुझाउन प्रस्ताब गरेका थिए। समाचारस्रोतले अगाडी भेनेको छ , ‘सरकारतर्फबाट बिद्रोही पक्षलाई हतियार बुझाउनुस् भनिएछ।’
सरकारी पक्षको हतियार बुझाउनुपर्ने प्रस्ताब प्रति प्रतिबाद गर्दै बिद्रोही पक्षले आफूहरुसंग ‘”हतियार नै नरहेको ” जिकिर गर्नुका साथै पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत/कारागारमा रहेका राजनीतिक बन्दी रिहा, झुट्ठा मुद्दा खारेज नभएसम्म थप बिषयमा वार्ता गर्नुको अर्थ नै नरहेको जिकिर गरेका समाचारस्रोतको दाबी छ। उनीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक गतिबिधि गर्न पाउनुपर्ने सुनिश्चितता भए मात्र थप कुरा अघि बढाउन सकिने संकेत गरेका थिए।
बिद्रोही पक्षसंग दुई चरणको वार्ता बस्दासम्म उनीहरुको मागका बारेमा सरकारी वार्ता टोलीले कुनै मुख नखोलेको समाचारस्रोतले उल्लेख गरेको छ। उनीहरुले जसरी पनि हत्या हिँसा त्यागेर शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। विदोही पक्षले बुधबार राती अबेरसम्म पार्टीको नेत्रित्वसंम वार्ताको प्रगति वारेम रिपोर्टिंग गरिरहेको थियो। वार्ता बिहीबार बस्ने भनिए पनि सरकारले बिद्रोही प्क्षको प्रारम्भिक मागको सुनुवाई नगरेसम्म थप वार्ता अघि बढ्न नसक्ने बताइएको छ।
मंगलबार सरकारले वार्ताका लागि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली र पार्टी प्रबक्ता प्रकाण्डको नेतृत्वमा विप्लव समूहको वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको (२०७७ फाल्गुन २०, बिहीबार) 2021-03-04 1629 Viewed